The Rakhaing's village
အကောင်းဆုံးဖြိုက်အောင် ကြိုးစား လုပ်နီပါရေ The Rakhaing's village
... ALP နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ သဘောတူညီချက် (၅) ခုကို လက်မှတ်ရေးထိုး) ... ရွှေဂတ်(စ်) စီမံကိန်း ရပ်တန့်ရန် နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ မှ အဖွဲ့အစည်း ၁၃၀ မှ တောင်းဆို ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် အထိ သွယ်တန်းမည့် ဂတ်စ် ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းပေးရန် ရွှေဂတ်စ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အပါအဝင် နိုင်ငံ ၂၀ မှ အဖွဲ့အစည်ပေါင်း ၁၃၀ က တောင်းဆိုလိုက်သည်။ (သတင်း.Narinjara)) ... ဒုဥက္ကဌ ခိုင်စိုးနိုင်အောင် ဦးဆောင်သော ALP ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ကို စစ်တွေမြို့တွင် ပြည်သူ သိန်းချီ ကြိုဆို
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့၌ ယနေ့ ပြုလုပ်ခဲ့သော ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် ရခိုင်ပြည် လွှတ်မြောက်ရေး ပါတီနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ အကြား ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရန် အတွက် ပဏာမ သဘောတူညီချက် (၅) ခုကို လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့သည်။
Posted by ရခိုင်ရို့ ရွာ
Labels: ပြည်တွင်း, ပြည်ပ, သတင်း
ပြည်နယ် အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရန် ယနေ့တွင် စစ်တွေမြို့သို့ လေယာဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိ လာသော ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး ပါတီမှ ဒုဥက္ကဌ ခိုင်စိုးနိုင်အောင် ဦးဆောင်သော ငြိမ်းချမ်း ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ပြည်သူများ သိန်းချီပြီး ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
ALP ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ကျောက်တော်တွင် သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆို
မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဦးအောင်သောင်း ဖိတ်ကြားချက်အရ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီမှ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၂) ခိုင်သုခဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်၊ ယနေ့(၂-၄-၁၂) နံနက်(၈)နာရီအချိန်တွင် ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့မှ ထွက်ခွါ လာရာ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့ဆိပ်ကမ်းသို့ (၁နာရီ ၅၀မိနစ်)ခန့်တွင် ရေယာဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိ် လာခဲ့သည်။
02.4.2012 နိ ALP ဗဟို ဌာနချုပ်ကခေါင်းဆောင်တိ့ကို ကျောက်တော် မြို့ ဒေပိုင် ကြိုဆိုနီပါရေ လူပေါင်း 6000 လောက် ကြိုဆို
02.4.2012 နိ ALP ဗဟို ဌာနချုပ်ကခေါင်းဆောင်တိ့ကို ကျောက်တော် မြို့ ဒေပိုင် ကြိုဆိုနီပါရေ လူပေါင်း 6000 လောက် ကြိုဆhttp://www.myoroemahar.co.cc/2012/04/0242012-alp-6000.html?zx=8155a71aa84de7a0ို
Posted by မြောက်လီ
Labels: ပြည်တွင်း, သတင်း
စိတ်ကြွ ဆေးပြားထုတ် စက်ရုံများ ပိတ်ပေးရန် ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ့က မြန်မာကို တောင်းဆို
စိတ်ကြွ ဆေးပြားထုတ် စက်ရုံများ ပိတ်ပေးရန် ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ့က မြန်မာကို တောင်းဆိုhttp://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=3905
ALP ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စောမြရာဇာလင်း ခရီးစဉ်ကို ဖျက်
Labels: ပြည်ပ, သတင်း
"စားပြီးနားမလည် လုပ်မနိန်ကေ့" ၂၀၁၂- ရခိုင် သင်္ကြန် သံချပ်ခွေ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့တွင် ၀ယ်ယူသူများ
"စားပြီးနားမလည် လုပ်မနိန်ကေ့" ၂၀၁၂- ရခိုင် သင်္ကြန် သံချပ်ခွေ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့တွင် ၀ယ်ယူသူများ http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=3901
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်တွင် အဖမ်းအဆီးများ၊ ရခိုင်များလည်း ဖမ်းဆီး ပြန်ပို့ ခံရရာတွင် ပါဝင
နစကနှင့် သစ်တောအုပ်များ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့သို့ သစ်ခိုးထုတ်
နစက ဗိုလ်ကြီး သင်္ကြန် စရိတ်အတွက် ကျေးရွာသားများပိုင် မီးသွေးအိတ်များကို သိမ်းပြီး ငွေရှာ
ပြည်နယ်အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ ALP နှင့် အစိုးရ ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့တွင် စတင်မည်http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=3892
"အစိမ်းရောင်ယူနီဖောင်း ဒီမိုကရေစီမှ အ၀ါရောင်စကတ် ဒီမိုကရေစီသို့"
ရခိုင်တိုင်ရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ(RNDP)မှထုတ်ဝေသော တိုးတက်ရေးသတင်းလွှာတွင်ပါရှိ သည့် ဆောင်းပါးရှင် တိုးတက်ခိုင်ရေးသားသော "အစိမ်းရောင်ယူနီဖောင်း ဒီမိုကရေစီမှ အ၀ါရောင်စကတ် ဒီမိုကရေစီသို့" ဆိုသော ဆောင်းပါးကြောင့် စာပေစီစစ်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးက ၁၉ရက်၊ ၃လ၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် RNDPမှ ကိုမြင့်နိုင်နှင့် ဦးကျော်ဇံသာတို့အား ခေါ်ယူပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ယခုကဲ့သို့ ဆောင်းပါးမျိုးပါလာခဲ့လျှင် စာစောင်ထုတ်ဝေခြင်း ပိတ်ပင်ခံရမည်ဟု ပြင်းထန်စွာ သတိပေးခြင်းခံခဲ့ရကြောင်း RNDPမှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးလှစော ပြောပြချက်အရ သိရှိရသည်။
၄င်းဆောင်းပါးမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၌ အုပ်ချူပ်သူအစိုးရအဆက်ဆက် တိုင်းရင်းသားများ အမျိုးမျိုးသော နိုင်ငံရေးလှည့်စားမှုများအတွင်း လူးလိမ့်ခံစားခဲ့ရခြင်းကို ဆောင်းပါးရှင် တိုးတက်ခိုင်မှ သမိုင်းများအား မီးမောင်းထိုးဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ရခိုင်လူငယ်တစ်ဦးက " ယခုပြောနေကြတဲ့ စတုတ္တမဏ္ဍိုင်ဆိုတာ အစိုးရသစ်အနေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ နားထောင်လို့ကောင်းရုံသာဖြစ်ပြီး လက်တွေ့မှာတော့ အခုချိန်ထိ စစ်အစိုးရ လက်ရာခြေရာတွေ မပျောက်သေးပါဘူး။ ဒီလိုပါတီတစ်ခုကိုတောင် ခေါ်ယူပြီးခြိမ်းခြောက်တယ်ဆိုရင် နောက်ထပ် ပုဂ္ဂလိက စာနယ်ဇင်းတွေ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့သာကြည့်လိုက်ပါတော့" လို့ပြောကြားသွားသည်။
ရခိုင်လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားနေသူ ကိုမင်းခန့်ကလည်း " ဒါဟာ အပြောနဲ့လက်တွေ့ မကိုက်ညီတာဘဲ၊ အစိုးရပြောနေတဲ့ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ဆိုတာ ဘယ်နားမှာလည်းလို့ ပြန်မေးရလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမျိုး လူတစ်ယောက်ရဲ့ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်တာဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက လိုက်နာကျင့်သုံးနေကြတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့ အပုဒ်(၉) လူတိုင်းလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော် ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရရှိရေး ကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်" လို့ ရှင်းပြသည်။
သတင်း အပြည့်အစုံ မူရင်း Arakan Times သို့ 
မောင်တောမြို့နယ် မဲဆန္ဒရှင်များမှ နိုင်ငံသားမဟုတ်သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၃)ဦးအား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းပေးရန် တောင်းဆို
၂၀၁၂ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ၄ရက်နေ့၌ မောင်တောမြို့နယ် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများမှ နိုင်ငံသားမဟုတ်သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၃)ဦးအား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ တင်ပြတောင်းဆိုလိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။သတင်းအပြည့်အစုံ Arakan Time သို့ 
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ်မှ လယ်သမား ၂၆ ဦးကို စစ်တပ်မှ သိမ်းယူထားသော ပုဇွန်တာများနှင့် လယ်မြေများကို ပြန်လည် ရယူရန် ကြိုးပမ်းမူဖြင့် စစ်တပ် နောက်ခံ ပြုထားသော စီးပွားရေး သမား တစ်ဦးက တရားစွဲဆို လိုက်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ သတင်း အပြည့်အစုံ Narinjara သို့ 
တော်လှန်ရေးသမား သက်ကြီးရွယ်အိုများ ဂုဏ်ပြုပူဇော်ပွဲ အတွက် အလှူငွေများ ထည့်ဝင်ရန် နိုးဆော်
၂၀၁၂-ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၇ ရက် ရခိုင်နှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့၌ ပြုလုပ်မည့် ရခိုင်တော်လှန်ရေးသမား သက်ကြီး ရွယ်အို များအား ဂုဏ်ပြုပူဇော်ပွဲ အတွက် ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်များ အနေဖြင့် အကူအညီများ ထည့်ဝင် လှူဒါန်း ကြရန် ဦးဆောင် လူပ်ရှားသူများက နိုင်ငံ တကာ ရခိုင် အသိုင်းအ၀ိုင်းသို့ ဆော်သြထားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။(သတင်း Narinjara)
Labels:ြ, ပြည်တွင်း, သတင်း
ဒေါ်စုကို ရခိုင်စည်တော်တီး၍ ကြိုမည်
ရန်ကုန်မြို့ တာမွေမြို့နယ်တွင် အပူဇော်ခံလျှက်ရှိသော ရှေးဟောင်း သမိုင်းဝင် မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီး၏ ရွှေထီးတော်အား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လာရောက်ဖူးမျှော်မည် ဖြစ်ရာ သူမအား ရခိုင်စည်တော်တီး၍ ကြိုဆို သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရွှေသား ၁၁ ပိသာ ၅၀ ကျပ်သားရှိ ရွှေထီးတော် (ဓါတ်ပုံ- အလိုတော်ပြည့်)
" ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မနက်ဖြန် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေ ၃ နာရီမှာ လာရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို ရခိုင်ရိုးရာ စည်တော်တွေ တီးပြီး ကြိုဆိုသွားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ပီးရင် တခြား ရခိုင်ရိုးရာ အကတွေနဲ့လည်း ဖြေဖျော်သွားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်" ဟု အခမ်းအနားကို စီစဉ်သူ အရှင် ကုမာရက နိရဉ္စရာသို့ ပြောသည်။
ကျောက်တော်မြို့နယ် မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တော်မြတ် သီတင်းသုံးရာ ကျောင်းဆောင်တော်၍ တင်မည့် ရွှေသား အလေးချိန် ၁၁ ပိဿ ၅၀ ကျပ်သားရှိ ရွှေထီးတော်အား ယခုအခါ အောင်မြေ ဗောဓိဓမ္မာရိပ်သာ အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတိုက်၊ တာမွေကလေးရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့တွင် အပူဇော်ခံနေရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုမှ မနက်ဖြန်တွင် လာရောက် ဖူးမျှော်ကန်တော့မည် ဖြစ်သည်။
" ဦးဇင်းတို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရခိုင်စည်တော်တီးပြီး ကြိုဆိုမှာက သူမကို ဂုဏ်ပြု အနေနဲ့ ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်စည်တော်ကို မင်္ဂလာ အခမ်းအနားတွေမှာ တီးခတ်တဲ့ အစဉ်အလာရှိတဲ့ အတွက် ကောင်းသော မင်္ဂလာ အကျိုးကို မျှော်မှန်းပြီး တီးခတ်ကြိုဆိုသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မုနိဘဂါဝ ပူဇာယိမ်း အကဖြင့်လည်း ဧည့်ခံပါမယ်" ဟု အရှင် ကုမာရ ဆက်ပြောသည်။
ရွှေထီးတော် ပူဇော်ပွဲအား လူအများအပြား လာရောက် ဖူးမျှော်နေကြရာ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ယခင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွှန့်နှင့် ဇနီး၊ ရခိုင် ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးသာဘန်းနှင့် အဖွဲ့၊ အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်သည့်နေ့က ရန်ကုန် မြို့တော်ဝန် ဦးလှမြင့်၊ ရခိုင်ရေးရာ ၀န်ကြီး ဦးဇော်အေးမောင်တို့လည်း လာရောက် ဖူးမျှော်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ ရွှေထီးတော်အား မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့မှ စစ်တွေမြို့သို့ ပင့်ဆောင်မည် ဖြစ်ပြီး မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၆ ရက်နေ့ထိ စစ်တွေ လေဆိပ် အနီးရှိ အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတွင် အပူဇော်ခံသွားမည် ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ နေ့ရက်များ အတွင်း ရခိုင် အဆိုတော်များနှင့် သရုပ်ဆောင်များ ဖြစ်ကြသည့် ၀င်းကိုခိုင်၊ L ကိုလင်း၊ နေထက်လင်း၊ နေမျိုးအောင် ဘုန်းလျှံ၊ ရတနာမိုင်၊ ညှာစိမ်းခိုင်၊ မြတ်ခိုင်ကျော်၊ သန်းဆွေနှင့် ဗမာ အဆိုတော်များ ဖြစ်ကြသည့် ပွင့်နဒီမောင်၊ ဆုပန်းထွာ၊ ချစ်စနိူးဦးတို့လည်း လာရောက် ဖြေဖျော် ကြမည် ဖြစ်သည်။
ရွှေထီးတော်အား စစ်တွေမြို့ အပါအ၀င် ဗုဒ္ဓပါဒခြေတော်ရာ-ရသေ့တောင်မြို့၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့၊ ပေါက်တောမြို့၊ မင်းပြားမြို့၊ မြောက်ဦးမြို့နှင့် ကျောက်တော်မြို့များတွင်လည်း လှည့်လည် အပူဇော်ခံမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၆.၄.၂၀၁၂ ရက်နေ့ တန်းခူးလဆန်း(၁၅) ရက် လပြည့်နေ့ တွင် ရွှေထီးတော်-ငှက်မြက်နားတော်-စိန်ဖူးတော်တို့အား (၃) ဘုံ (၃)ဆင့် ရွှေသား ထီးတော်ကြီးအား ကျောက်တော်မြို့ မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီး ကိန်းဝပ်ရာ ကျောင်းတော်တွင် တင်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။from narinjar burmese news
Posted by uthansoe
ရခိုင်မဟာမြတ်မုနိဘုရား ထီးပူဇော်ပွဲ အကြိုစတိတ်ရှိုးလုပ်ဖို့
ရခိုင်မဟာမြတ်မုနိဘုရား ထီးပူဇော်ပွဲ အကြိုစတိတ်ရှိုးလုပ်ဖို့http://www.laywaddyarakan.com/2012/03/blog-post_8007.html
မောင်တောခရိုင်မှာ ဘ၈င်္လီလူမျိုးရာ နီထိုင် တဖက်နိုင်ငံက ခိုးဝင်လာရေ လူမျိုးနင့် ဘာသာတူယိုင်ကျေးမှူတူ
ဘင်္ဂလားပင်လယ်ပြင် ရခိုင်သား မကြီးစိုးပါလီဗျယ်ကာ
ငြိမ်းချမ်းရေးကိုကြိုဆိုထားရေ ရခိုင်မျိုးချစ်တော်လှန်ရေး(ALA)တပ်နန့် ခမရ(၃၄၄)စစ်တပ်အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်နှစ်ယောက်သီ တယောက်ဒါဏ်ရာရ
ထိုင်းနယ်စပ်မှာဗမာချေနန့် အိမ်ထောင်ကျနိန်ရေရခိုင်သမချေ တယောက်အဆိပ်စားလို့ သီဆုံး
ပေါက်တောမြို့နယ်အတွင်း သိမ်းယူထားသည့် လယ်ယာမြေ များကို ပြန်ပေးပါ။
နယ်စပ်တွင် မြန်မာတပ်များ တိုးချနေကြောင်း သတင်းများ ပျံ့နှံ့
အမျိုးသမီး ၂ ဦးကို သုံးရက်ချုပ်ပြီး ငွေညစ်သူ ဒုရဲအုပ် တိုင်ကြားခံရ
ဧည့်စာရင်းစစ် အယောင်ဆောင်ပြီး ညားခါစ အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးကို မုဒိမ်းပြုကျင့်
အသိမ်းခံ လယ်မြေအတွက် လျော်ကြေး တောင်းသူ ခြိမ်းခြောက်ခံရ
အသိမ်းခံ လယ်မြေအတွက် လျော်ကြေး တောင်းသူ ခြိမ်းခြောက်ခံရ http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=3863
ရက္ခအလင်းတန်း လူပ်ရှားမူ ဧရာဝတီတိုင်းထိ တိုးချဲ့
ရက္ခအလင်းတန်း လူပ်ရှားမူ ဧရာဝတီတိုင်းထိ တိုးချဲ့ http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=3860
ရေပြင်ပိုင်နက် အငြင်းပွားမှု ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျ အသာရhttp://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=3858
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး အငြင်းပွားရေပြင်ပိုင်နက် စီရင်ချက်ကို နားထောင်ရန် ဂျာမဏီသို့ထွက်ခွာ
မန်းငြိမ်းမောင်အား တစ်သက်တစ်ကျွန်းပြစ်ဒဏ် ချမှတ်မူ နိုင်ငံရေးအရ မသင့်တော်ဟု ရှေ့နေကြီး တစ်ဦးမှ ပြောကြား
ကျောက်ဖြူတွင် နိုင်ငံခြား အလုပ်သမား တချို့သေဆုံးကြောင်း သတင်းဖြစ်
အလျားပေ ၂၀ ခန့်ရှိ ဝေလ ငါးမန်း နှစ်ကောင် သေဆုံးမူမှာ ဂတ်စ်ပိုက်လိုင်း အတွက် သန္တာကျောက်တန်များကို မိုင်းခွဲမူကြောင့် ဖြစ်ဖွယ်ရှိ
ကွယ်လွန် မင်းပြား လွှတ်တော် အမတ် ဦးအောင်စိန်သာ အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနား စစ်တွေတွင်ပြုလုပ်
ကွယ်လွန် မင်းပြား လွှတ်တော် အမတ် ဦးအောင်စိန်သာ အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနား စစ်တွေတွင်ပြုလုပ် http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=3853
Arakan Times က ရခိုင်သတင်း ဗွီဒီယို
Labels: ဗွီဒီယို, သတင်း
လေးမြို့ချောင်းမှာ ကျောက်စရစ်အထုတ်များလို့ နှစ်စိုင်ကမ်းပြို
မြောက်ဦးမြို့နယ် လေးမြို့ချောင်းရေ ကျောက်စရိုက်အလွန်အကျွံအထုတ်များလို့ မြစ်ကြောင်းတိ ပြောင်းစော်တိ
ဖြစ်လာပြီးကေ နှစ်စိုင် နှစ်တိုင်း မြစ်ကမ်း ရီတိုက်စားရေလို့ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်စောင့်ကြည့်လေ့ လာသူရို့တိ ပြောကြား(သတင်း. လေးဝတီ)
ချစ်စဖွယ်ကောင်းသော စစ်တွေမြို့ တပေါင်းလ သဲပုံစေတီပွဲ အထူးစည်ကား
ဘင်္ဂလာ-မြန်မာ တပ်မှူး အဆင့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် မူးယစ်နှိမ်နှင်းရေး သဘောတူ
ရမ်းဗြဲမှာ ဘုတ်မြုပ်လို့လူ နှစ်ယောက်သီဆုံး၊ ခြောက်ယောက် ပျောက်နိန်
ရခိုင်ပြည်နယ် ရမ်းဗြဲမြို့နယ်မှာ ခရီးသည်တင် ဘုတ်တစ်စီး ညက ညဇာဘက်မှာ မြုပ်လားခလို့လူနှစ်ယောက်သီဆုံးဗနာ ခြောက်ယောက်ပျောက်နိန်ကြောင်း သတင်းရဟိပါရေ။ (သတင်း. Narinjara)
ရခိုင်အစစ်ကေချေတယောက်ကို စစ်သားအဖြစ် စုဆောင်းခံရစွာကို အိုင်အယ်လ်အိုသို့ တိုင်ကြား
အသက်မပြည့်သိမ့်ရေ အစစ်ကေချေ တယောက်ကို စစ်သား အဖြစ် စုဆောင်းဗနာတပ်ထဲကို သွင်းလိုက်စွာအပေါ် မိဖတိက လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တစ်ခုက တဆင့် ကမ္ဘာ့ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် အိုင်အယ်လ်အို သို့တိုင်ကြားလိုက်တေလို့သတင်းရဟိပါရေ။(သတင်း.Narinjara)
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် အထိ သွယ်တန်းမည့် ဂတ်စ် ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းပေးရန် ရွှေဂတ်စ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အပါအဝင် နိုင်ငံ ၂၀ မှ အဖွဲ့အစည်ပေါင်း ၁၃၀ က တောင်းဆိုလိုက်သည်။ (သတင်း.Narinjara)
ရက္ခိတပညာရီးရံပုံငွေ (မြောက်ဦး) ဖွဲ့စီးခြင်း
မိဘမဟိရေ အချေတိကို စောင့်ရှောက်နိန်ရေ ကျောင်းတိနန့် ပရဟိတကျောင်းတိဖြိုက်ကတ်တေ ရမ္မာဝတီ ဆရာတော်အရှင်ပညာစာရ ဦးဆောင်ရေ မဟာမုနိ ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ မိဘမိဟိရေအချေတိကျောင်း (စစ်တွေ)၊ အပါ အ၀င် ဆရာတော် ဇယန္တဗေါဓိ ဦးဆောင်ရေ ဂရုဏာဥယိုင်ပရဟိတကျောင်း (မြောက်ဦး/အထက်လီ ညှင်းတောင်) ကျောင်းနန့် ဆရာကျော်ထွန်းအောင် (စာရွီးဆရာ-ရခိုင်သမိုင်းသုတေသီ ဆရာတက်ထွန်းနီ /မြောက်ဦး) ရို့ ခေါင်းဆောင်ရေ တေဇာရာမ ပရဟိတကျောင်း (မြောက်ဦး) ရို့မှာ ပညာသင်ကြားနိန်ကတေ မိဘ မဟိရေ အချေတိနန့် မရှိဆင်းရဲသား အချေတိ ပညာရေးအတွက် ရေရှည် အထောက်အကူပြု နိုင်ဖို့ ဆိုစော်ကို ရည်ရွယ်ပြီးကေ ပညာရီးရံပုံငွေ (ရာသက်ပန်ငွေပဒေသာပင်) တစ်ခုကို ဦးထွန်းအောင်ကျော် (မလေးရှား)က ဖွဲ့စီးဘနာ ပြု လုပ် (သတင်း. လေးဝတီ)
ရန်ကုန် ရွှေဂက်စ် လှုပ်ရှားသူများ ခံဝန် လက်မှတ်ထိုးရ
နိုင်ငံတကာ ရွှေဂက်စ် လှုပ်ရှားမှုနေ့ အနေနှင့် ယနေ့၌ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တည်ဆောက်နေသော ရွှေဂက်စ် စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်း ရေး လှုပ်ရှားမှုကို ရန်ကုန်မြို့တိုင်းရင်းသား ကျေးရွာ၌ပြုလုပ်ရာ ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက ခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်း၍ ခံဝန်ကတိ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းကြောင်း သိရသည်။ (သတင်း ဧရာဝတီ)
ရခိုင်ရို့ ရွာ အကြောင်း
ရခိုင်သတင်း ရခိုင်သမိုင်း ရခိုင်အကြောင်းတိကို တနီရာထဲမှာ
လလွယ် ကကူနန့်ဖတ်နှိုင်ဖို့ အတွက်
ရခိုင်ရနံ့ ၊ ရခိုင်သတင်းတိကို စုပေါင်းထားရေ နီရာ
ရခိုင်သတင်း ရခိုင်ရနံ့ တိ မွှီးကြိုင်နှိုင်ဖို့ 
ရခိုင်နန့် ပတ်သတ်တေ သတင်းတိကို ပို့ ပီးဗနာ ရခိုင်စာပီးတိုးတက်လာဖို့ ကို ၀ိုင်းဝန်း ကူညီ
ကတ်ဖို့ ကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါရေ....
ရခိုင်ရို့ ရွာကို သတင်းတိ ပို့ ပီးချင်ပါကေ therakhaingvillage@gmail.com ကိုပို့ ပီးနှိုင်ပါရေ..
နိုင်ငံတကာရေးရာ ရက္ခိုင်သတင်းစဉ် ၂၀၁၂
...Narinjara news feb 2012 ... Arakan Time news
The Arakan Internal News
မြောက်ဦးမြို့နယ် လေးမြို့ချောင်းရေ ကျောက်စရိုက်အလွန်အကျွံအထုတ်များလို့ မြစ်ကြောင်းတိ ပြောင်းစော်တိ ဖြစ်လာပြီးကေ နှစ်စိုင် နှစ်တိုင်း မြစ်ကမ...
"စားပြီးနားမလည် လုပ်မနိန်ကေ့" ၂၀၁၂- ရခိုင် သင်္ကြန် သံချပ်ခွေ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့တွင် ၀ယ်ယူသူများ http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id...
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့၌ ယနေ့ ပြုလုပ်ခဲ့သော ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် ရခိုင်ပြည် လွှတ်မြောက်ရေး ပါတီနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ အကြား...
ရခိုင်မဟာမြတ်မုနိဘုရား ထီးပူဇော်ပွဲ အကြိုစတိတ်ရှိုးလုပ်ဖို့ http://www.laywaddyarakan.com/2012/03/blog-post_8007.html
The Rakhaing's Village ကို အီးမေး ပို့ ချင်ပါဂေ therakhaingvillage@gmail.com ကို ဆက်သွယ်နှိုင်ပါရေ. Travel theme. Powered by Blogger.